Nhau - Maitiro ekuchengetedza iyo raincoat
1. Tepi raincoat
Kana raincoat rako iri raincoat rerabha, iwe unofanirwa kuisa mbatya dzakashandiswa munzvimbo inotonhorera uye ine mhepo pakarepo mushure mekushandisa, uye woma iro raincoat. Kana paine tsvina pajazi rako rinonaya, unogona kuisa raincoat yako patafura yakati sandara, uye zvinyoro nyoro nebhurashi nyoro rakanyikwa mune imwe mvura yakachena kuti ubvise tsvina pairi. Rangarira jasi rinonyorerwa mvura Haikwanise kukwizwa nemaoko, ndoda kuburitswa muzuva, uye harigone kupiswa pamoto, uye harigone kucheneswa nesipo dziya dzealkaline. Icho chinangwa cheichi ndechekudzivirira raincoat kukwegura. Kana kuve brittle.
Iyo tepi raincoat haigone kuiswa pamwe nemafuta, uye inofanirwa kuunganidzwa kumusoro kana ichichengetwa. Usaise zvinhu zvinorema pajasi remvura, uye usazviisa nezvinhu zvinopisa kudzivirira kuti zvisadzvinyirirwa pajasi remvura. Mapeta, kana kutsemuka. Isa mamwe mothball mubhokisi rejazi rinonaya rairabha kudzivirira iyo raincoat kuti isanamatire.
2. Jira risinganaye mvura raincoat
Kana jasi rako riine jasi remvura, kana iro jasi rinonaya nemvura, haugone kushandisa maoko ako kana ngowani yehuswa kubhainisa mvura yemvura iri pajazi, nekuti kuita izvi kunogona kukanganisa mashandiro asina mvura emicheka irimo.
Mvura inonaya haina kukodzera kugezwa kazhinji. Ukaigeza nguva zhinji, zvinokwanisika kuti kushanda kwemvura kwejasi kunoserera. Kana iwe uchifunga kuti jasi rako rinosviba zvakanyanya, unogona kukwiza zvinyoro-nyoro raincoat nemvura yakachena, wobva waomesa jasi rinosukwa, ndokurembedza kuti riome. Kana raincoat ranyatsoomeswa, tora iron Ingoipisa. Kana uchizobvisa jasi remvura, unofanira kurega mbatya dzacho dziome zvachose usati wazipeta. Izvi ndezvekudzivirira kupindirana kwemakemikari echinhu chine waxy mujasi nekuda kwehunyoro, izvo zvinoita kuti raincoat mildew.
3.Purasitiki firimu raincoat
Kana jasi rako remvura riri repurasitiki raincoat, kana iro jasi rinonaya, unofanira kubva wapukuta mvura iri pajazi nemucheka wakaoma, kana kutora raincoat kunzvimbo inotonhorera uye yakaoma woomesa.
Mapurasitiki emafirimu emvura anonaya haagoni kuratidzwa kuzuva, ndoda kubikwa pamoto. Kana jasi rako remvura rakakwinyika uye risingakwanise kuayinwa nedare, unogona kunyorova juzi rinonaya mumvura inodziya pamakumi manomwe kusvika makumi masere pamadhigiri kweminiti imwe, wozoiburitsa ndokuisa patafura yakati sandara. Shandisa yako Tambanudza jasi remvura rakatsetseka nemaoko ako. Usadhonze jasi rinonaya zvakaoma kuti unzve kushanduka kwejasi. Kana iyo raincoat repurasitiki ichishandiswa kwenguva yakareba, zviri nyore kudzikira kana kutsemuka. Kana musodzi uri pajasi rejasi usina kunyanyisa kukura, saka Unogona kusarudza kuzvigadzirisa pachako.
Nzira yekugadzirisa ndeiyi: isa chidimbu chemufirimu panobvaruka jasi remvura, wozoisa chidimbu che cellophane pamusoro pefirimu. Wobva washandisa simbi yemagetsi kuchimbidza kuayina kuitira kuti bhaisikopo rigone kunamatira pamuromo wakabvaruka kuti upedze kugadzirisa. Kana tichigadzirisa majasi anonaya, isu tinofanirwa kuyeuka chinhu chimwe: majasi emvura haakwanise kusonwa netsono. Zvikasadaro, zvinogona kukonzeresa matambudziko akakura nejasi remvura.